News Collection: कृष्णसँग हट टक - बिनिता बराल (नायिका)
कृष्णसँग हट टक - बिनिता बराल (नायिका)
स्लिम बिनिता सेक्सी कि राम्री ?
पक्कै पनि सेक्सी ! म त्यति सुन्दर छु जस्तो लाग्दैन। मेरा 'अदाहरू' का कारण दर्शकहरू मलाई राम्रीभन्दा पनि सेक्सी मान्नु हुन्छ। वास्तवमा म छु नै त्यस्ति !
सेक्सी भैरहन त मेन्टेन पनि आवश्यक पर्छ होला नि ?
राम्री देखिन पो मेन्टेन गर्नुपर्छ त। म सेक्सी भएकाले खासै मेन्टेन गर्नुपर्दैन। मेरो अपियरेन्स सेक्सी भए पनि म भित्रबाट चाहिँ सुन्दर नै छु।
विवादको अर्को नाम बिनिता बराल हो भन्छन् नि ?
विवादभन्दा पनि चर्चाको अर्को नामचाहिँ बिनिता बराल हो जस्तो लाग्छ। नकारात्मक र सकारात्मक जस्तो प्रसंग भए पनि म प्रायः चर्चामै छु।
विवाद/चर्चामा आइरहने कारण चाहिँ के हो ?
सम्भवतः मलाई दर्शकहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ। मैले सानो कदम चाले भने पनि बिनिता कहाँ छे, के गर्दैछे भन्ने कुराको चासो धेरैलाई हुन्छ। त्यसैले पनि म राम्रा-नराम्रा प्रसंगका कारण चर्चा (विवाद) मा आइरहन्छु।
चपली हाइटले बढाएको हाइट 'फुलस्टप'ले फुलस्टप लगाउने त होइन ?
यसले मेरो हाइट त झन् बढाउनेछ किनभने मैले जति पनि माया पाइरहेकी थिएँ, चपलीहाइटकी बिनी भएकीले पाएकी थिएँ, फुलस्टपमा प्रासुका रूपमा थप स्नेह पाउनेछु भन्ने कुरामा ढुक्क छु। मलाई लाग्छ 'फुलस्टप' प्रदर्शन भए पछि मेरो स्ट्रगलमा चाहिँ फुलस्टप लाग्नेछ।